Hackers Hack - I-Semalt Expert Concerns
Kuzo zonke iinkcukacha ze-intanethi ezibandakanya umncedisi, ngokuqhelekileyo kukho umngcipheko wokukhwabanisa. II-intanethi kubandakanya ukuthumela umsebenzisi nokufumana ulwazi kumncedisi. Ngenxa yoko, ezininzi zophuhliso lwewebhu zijolise kumsebenzisi kwayeayinokuzinza kwenkqubo. Ngenxa yalesi sizathu, abantu bayakha iwebhusayithi ye-e-yorhwebo engayenza kuphela le mizekelo ngendlela engumzekelo,ukungahoywa into yokuba abantu abaneenjongo zokugula bangasebenzisa eli thuba. Ngenxa yoko, ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunye neyoAbaxumi bakho kuxhomekeke ekusebenzeni ngokukhawuleza ukulwa nemizamo yokukhahlela.
Kukho iindlela ezininzi abantu abaqhuba ngayo iindawo zabo. Hackers 'injongo kukufumana ukungena okungekho mthethweni kwi-intanethi kwaye ufumane ufikelelo kolwazi olungenjalo kwi-database yolwazi. Kwezinye iimeko, banokuzamaukuzisa i-website phantsi usebenzisa i-botnets okanye ezinye iindlela ezinobungozi. Abantu abaninzi abenza iiwebhusayithi ezifana neeblogs okanye kwi-e-commerce site zibuzaindlela abahlaseli baqhuba ngayo iindawo zabo. Ngomnye ukuseka iindlela kunye neendlela zokuthintela abahlaseli, kukho imfuneko yokuqonda indlela abahlaseli ngayohack iiwebhsayithi.
uJack Miller, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt ,icacisa ezinye iindlela, abaduni abazenzayo, njengezansi:
Abahlaseli be-Site Site (XSS)
Lawa makhonkco asebenzisanayo angasebenza kumncedisi kwaye ahlasele abantu abasengozinikhomputha..I-hacker iqala ngokukhohlisa umsebenzisi ekuchofozeni ikhonkco eyingozi. Lekhonkco isebenzisa iskripthi kwisiphequluli, aphoI-hacker ifumana iziteshi zokusebenzisa ezinye izixhobo. Ngokomzekelo, i-hacker ingathatha yonke idatha yesiphequluli njengamaphasiwedi kunye ne-cache. I hackerUngasebenzisa kwakhona iimpawu zesibhrawuzi njengemakrofoni kunye nekhamera yewebhu kude ngaphandle kwemvume yexhoba.
Oku kusebenzisa kakubi ukutshatyalaliswa kweelwimi ezithile. Okuukuxhaphaza kakhulu isebenza kwiiwebhusayithi ezinesakhiwo sekhowudi esibi. Ngokomzekelo, isiza se-PHP sinokuxhomekeka kuhlaselo lwe-SQL.I-hacker izama kuphela ukufikelela kwiziko lewebhu kwaye ifumana yonke idatha. Ulwazi olufana nedatha yenkampani, ukungena ngemvume komsebenzisi kunye nekhredithiulwazi lwekhadi luba lukhuseleke ngale ndlela. Ngaphezu koko, umhlaseli unokukhuphela kwakhona, alayishe okanye ahlele amasimi kwiikholam kunye nemigqakwedatha oyisebenzisayo. Kwezinye iimeko, abahlaseli bangasebenzisa ukulungiswa kwePakethe, apho beba idatha njengoko idlula phakathi komncedisikunye nomsebenzisi.
Xa senza amawebhsayithi, siyahluleka ukuqaphela ukulahlekelwa ngabalahleki abakwaziyoukubeka kwi-e-yorhwebo shishini. Ngenxa yoko, ezininzi iiwebhusayithi zakhiwa ukukhonza umthengi ngaphandle kwengqondo. Hackers zingafezaezininzi iinkqubo kwiwebhusayithi, eninzi inokubandakanya ukuba, ukukhwabanisa okanye ukuchithwa kolwazi lwabucala. Ngamafutshane, ukhuseleko lwakhoindawo, kunye neentlawulo zabaxhasi bakho, kuxhomekeke kuwe, umnini nomphathi. Uninzi lweeNjini zoPhando lwe-Optimization (SEO) ezijoliswe ekunyuseniukufaneleka kwewebhusayithi kunye nokubonakala kwe-SERP. AbaHackers bangahlawula isayithi kulo mbandela. Ulwazi malunga neendlela zokukhwabanisaUnokugcina ukulahleka kwenkampani enkulu kunye nokwandiswa kwegunya lesigqeba kwiinjini zophando ngenxa yokhuseleko.